Kooxda Man United oo qorsheysatay inay 200 milyan oo gini bisha Janaayo kula soo wareegto labo laacib oo da’yar ah – Gool FM
(Manchester) 16 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso inay 200 milyan oo gini bisha Janaayo kula soo wareegto labo xiddig oo da’yar ah kuwaasoo wacdaro muuqda ka dhigaya qaaradda Yurub.
Manchester United ayaa la soo sheegayaa inay u dhaqaaqayso suuqa kala iibsiga bisha Janaayo ee soo aaddan Weeraryahanka Kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho iyo Dhaliyaha Naadiga Red Bull Salzburg ee Erling Haaland.
Labadaan ciyaaryahan ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inay u dhaqaaqayaan garoonka Old Traffrod bilihii dhowaa, kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska ayaana isku diyaarinaysa inay lacago badan qarash-gareyso si ay dib ugu soo ceshato awoodeedii.
Man United waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto xiddigo da’yar ah oo wax u tara kooxda ugu yaraan 10-ka sano ee soo aaddan.
Red Devils ayaa la soo sheegayaa inay isku diyaarinayso inay sugto illaa xagaaga soo aaddan si ay u soo qaadato labadaan weeraryahan, laakiin sida ay sheegayso Jariiradda The Mirror Kooxda ayaa miisaameysa inay lacag dhan 200 milyan oo gini ay suuqa Janaayo ku soo qaadato labadaan laacib.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Sancho uu kooxda macallin Ole Gunnar Solskjaer ugu kici karo 100 milyan oo gini, halka Haaland ay u badan tahay inay ku hesho 85 milyan oo gini.
Qaab ciyaareedka Sancho ee kooxda Dortmund ayaa sababay in la arko isaga oo la la xiriirinayo kooxo badan oo qaaradda Yurub ah, halka sidaas oo kale la dhihi karo Haaland kaasoo dhaliyay 26 gool 18 kulan oo uu u saftay Kooxdiisa xilli ciyaareedkan.
Man United ayaa iska xoojisay suuqii xagaaga dhankeeda daafaca, waxaana ay la soo saxiixdeen Aaron Wan-Bissaka iyo Harry Maguire, laakiin kaddib markii ay kooxda ka tageen Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez, macallin Solskjaer waxaa ku yaraaday xulashada dhanka Weerarka.
Kooxda Man Utd ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Brescia, Sandro Tonali, iyadoo dib u dhis xooggan ay isku sameynayso kooxda ka dhisan garoonka Old Trafford tan iyo markii uu tagay Tababare Sir Alex Ferguson.